Yini okufanele ibe umnyango ngokhuni phambi ukunikeza?
Kaningi, bakithi isethwe ku zabo Cottages iminyango osekuyisikhathi eside wakhonza isikhathi sabo efulethini idolobha. Yiqiniso lokhu? Kuyasiza ukuthi ukonga enjalo ngisindise abanye imali yakho?
Wokufaka umnyango ngokhuni ukunikeza kufanele abe ezinhle umthelela ukumelana nokuqina kwayo. izimfuneko ezinjalo zihlekwa ngu ukhuni lezihlahla izinhlobo. Ngaphezu kwalokho, it has umsindo ezinhle futhi ukushisa ukwahlukanisa. Ingaphezulu kuwebhu ukuba kwagcwala ekhuthaza ekhethekile evikela ukhuni emathonyeni kwezemvelo okunomthelela omubi kakhulu. Lokhu kungaba umswakama-ubufakazi ukuvenisha noma upende Ingaphandle. Lokhu yokungena umnyango ngokhuni ukunikeza kungenziwa upholstered lesikhumba, okuyinto ibekwe ngaphansi ukwahlukanisa.
Umnyango amayunithi ekhiqizwa ngokusho ubuchwepheshe obehlukene, kodwa iningi ezimbili zama - isihlangu futhi filenchaty. Okwamanje, abaningi ababefuna ngenkani uhlobo lwesibili. Inqubo yokukhiqiza yalezi iminyango liyinkimbinkimbi kakhulu, futhi intengo zabo lingaphezulu kakhulu kunaleyo analogue isihlangu.
Ungakhohlwa mayelana nokubonakala imodeli oyikhethile. Wokufaka umnyango ngokhuni ukunikeza ngokuvamile inquma obugagu kanye isithunzi jikelele isitayela yezakhiwo kanye libonisa ukunambitheka umnikazi ekhaya. ikakhulukazi ezithakazelisayo Kubukeka endlini suburban lapho iminyango namafasitela benziwe umklamo isinqumo olulodwa.
Classic lokhuni umnyango yokungena ukunikeza amalungu afanayo zenani ngenxa yobuhle balo, nokuhlanzeka kwemvelo, ukuqina, ukuphepha kanye nekhono ukudala sekugcineni esiyingqayizivele. Nokho, lokhu imodeli ubhekwa elite, futhi izindleko zalo impela high. Kukhona izibonelo ukonga ngaphezulu, okuyinto ishibhile kuka iminyango afanayo. Zenziwa amabhodi noma ukhuni amapuleti ahlukene by ukusondelana ngaphansi kwengcindezi okusezingeni eliphezulu nge ekhethekile ezisindayo-duty ingcina izingoma. Top ebusweni iphathwa amanzi-oxosha impahla kanye varnished. Lolu khuni iphathwa akuyona kuphela hhayi eliphansi kuya amandla afanayo, kodwa ngezindlela eziningi aphakeme kuso. Ngakho ungaqiniseka ngokugcwele ethule, ukubeka dials umnyango cottage.
Ukungena ukhuni umnyango ne ingilazi ubukeka umxhwele kakhulu ngaso sonke isikhathi. Nanguya enhle kakhulu, ethembekile, ivikelwe kahle kulabo okungafanele vakashela. Eyabaningi onobuhle ezikhona yokungena iminyango-ke lokhu ungumholi in ukuthandwa. enhle kakhulu izifo imodeli ukubukeka, uma ukuhlobisa grille zokuhlobisa, nakho kuyinto ukuvikelwa eyengeziwe. Ngakho-ke, lezi iminyango ungabekwa indlu yezwe, futhi kuleli zwe.
Namuhla ukwakhiwa dacha buthola umfutho okungakaze kubonwe ngaphambili. Uma ukwakhela cottage ehlobo lwendlu yakhe entsha, ngaphambi kokuqala inqubo, udinga ukuqonda kahle indlela ofuna ukuthi. Kaningi emnyango endlini entsha akuyona ejwayelekile. Kulokhu, ukhetho best - isicabha nomakhi. Kuyinto elula kakhulu - ubonisa zonke amasampula, wenze izilinganiso ezidingekayo kanye ze ngeke ufake imodeli yakho ekhethiwe. Ngaphezu kwalokho, abakhiqizi ngokuvamile bayakwazi ukunikeza yesiqinisekiso esiningi umsebenzi ukufakwa nokubeka imikhiqizo yayo.
Isambulela "Rainbow" - ajabule uma isimo sezulu esibi
Spandex - Indwangu izakhiwo esiyingqayizivele
Model nomlingisikazi Shimitsu Dzhenni
I-Flag kanye ne-armor: Yakutia nezimpawu zayo zesizwe
Kuvele unesandla ezinguqukweni ezimangalisayo: abadlali abadlale izindima eziningana ifilimu efanayo
Entendeni silume kwesokudla? Bheka iqoqo intando yabantu!
Vsevolod Nestayko: Biography, lokusungula
Ama-capsules e-Squesito womshini wekhofi - isiqinisekiso sokwenza ikhofi esimnandi
Dome amakhaya ngezandla zabo: ukwakhiwa ngaphandle kwezinkinga